Katalọgụ: Holtop Rooftop Packaged Air Conditioner
Holtop n'elu ụlọ packaged ikuku conditioner bụ n'etiti size AC akụrụngwa na-agwakọta ọrụ nke HVAC (jụrụ, kpo oku na ikuku ventilashion wdg) Ma ọ nwere niile mmiri nke Compressor, evaporator, condenser na valves wdg na otu unit. Holtop n'elu ụlọ packaged ikuku conditioner na-arụnyere na n'elu ụlọ oche na azụmahịa ngwa.
Eco-enyi na enyi: Eco-friendly type R410A refrigerant, obere refrigerant ogwu ogbugba olu.
Anụ na pụrụ ịdabere: A na-eji Compressor eme ihe site na ihe ndị na-egbochi okpomọkụ, akụkụ ndị ọzọ na-ebubata site na ụdị ndị ụwa, usoro siri ike na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
Ngwugwu na Kọmpat Design: Ejikọtara ya na ime ụlọ na nke dị n'èzí iji belata ntinye ego oru ngo ahụ, belata oge ntinye, chekwaa ohere echichi na mmezi dị mfe kwa ụbọchị.
1. Mee ka usoro dị mfe, ntinye ego nke ala:
Holtop n'elu ụlọ packaged ikuku conditioner arịọ maka jụrụ ma ọ bụ jụrụ mmiri usoro, nke nwere ike ịzọpụta ndị na-eri nke mgbasa mgbapụta, jụrụ ụlọ elu, na ndị ọzọ dị mkpa na akụrụngwa a na usoro, si otú belata mkpokọta ego na mmezi na-eri na HVAC usoro a ukwuu .
2. Kọmpat Design, Easy na Mgbanwe echichi, Low akara ukwu
Onye ọrụ chọrọ na echichi na-atụle nke ọma. The unit na-nakweere kọmpat imewe echiche na tụnyere na ime ụlọ na n'èzí condenser nkeji nke mere na ọ dịghị ọzọ refrigerant anwụrụ njikọ na ịgbado ọkụ ọrụ na saịtị, na Ọ bụ nchebe na mfe maka nnyefe na echichi.
Holtop n'elu ụlọ packaged ikuku conditioner nwere ike enịm n'èzí n'ala ma ọ bụ n'elu ụlọ oche, ọ dịghị chọrọ igwe ụlọ ma ọ bụ ime ụlọ ohere maka ụlọ na ngwugwu unit.
Naanị ole na ole na-arụ ọrụ maka ike cabling, akara wiring, ducting na-mkpa tupu usoro ọrụ
3. Nguzogide mmebi, Ọnọdụ Ọnọdụ Ọnọdụ ellentdị Mma
Ngwunye ihe eji arụ ọrụ bụ ntụ ntụ dị ka mgbochi corrosion. -Kpụrụ okpu ọkụ nke nwere ike dị elu, nke nwere okpukpu abụọ nke PU sandwich, na ihe ngosi ihu igwe ihu igwe maka nrụnye n'èzí, ha niile na-eme ka mmezi ya dị mma na ọnọdụ dị iche iche ihu igwe na mpaghara dị iche iche.
4. Wide okpomọkụ nso Operation
Ọnọdụ jụrụ oyi nwere ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị elu ruo 43 Celsius C, dịkwa ya mgbe ọ dị naanị 15 Celsius C, iji mejuo ọchịchọ jụrụ pụrụ iche na ụfọdụ ngwa ụfọdụ. Heating dị ọbụna n'èzí okpomọkụ dị ka ala dị -10 ° C.
5. Nhazi maka oru
Holtop n'elu ụlọ packaged air conditioner nkọwapụta na ọtọ ngalaba nwere ike e mere na-arụpụtara dị ka kpọmkwem oru ngo. Dịka ọmụmaatụ, nrụgide dị elu dị n'èzí dị maka ikuku ikuku dị ogologo iji mee ka ikuku zuru oke na ime ụlọ akuku ọ bụla; Enwere ike ịhazi ngalaba nhọrọ iji mezuo ihe onye ahịa chọrọ ma mepụta ọnọdụ ihu igwe dị mma n'ime ụlọ.
Nke gara aga: Single Room Wall Mounted Ductless Okpomọkụ Energy Recovery Ventilator
Osote: Holtop Modular Air Mma Chiller na Okpomọkụ mgbapụta
Ntụ oyi Nkeji soplaya
Na-ogbe nkenke Air conditioner (Link-Cloud S ...
Na-Ahịrị nkenke Air conditioner (Link-undergbè Eluigwe ...
In-Room nkenke Air conditioner (Link-Wind Se ...